Shaashadda had iyo jeer firfircoon ee iPhone 13 waxay noqon doontaa midda kor u qaadda gacantaada | Wararka IPhone
Shaashadda had iyo jeer ku jirta shaashadda iPhone 13 waxay noqon doontaa midda sare u qaadaysa shaarka
Ku dhawaaqida iPhone 13 ayaa soo dhowaanaya, in kasta oo ay jiri doonaan warar kale oo muhiim ah, wax in yar loo sheegay sida shaashadda mar walba shaashadda kuugu fiican ayaa kuu noqon karta.
Xilliga aan arki doonno iPhone 13 ayaa soo dhowaanaya, laga yaabee isla bishaan Sebtember, kaliya laba bilood laga bilaabo maanta. Inbadan baa laga yidhi sheekooyinkeeda cusub, sida ugu fiican kamaradda, marwalba soo dhawow, iyo shaashadeeda cusub ee 'True Motion' oo leh 120Hz, sida kan iPad Pro horeyba u lahaa dhowr jiilalka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira wax ku saabsan wax yar oo laga sheegay: shaashadda had iyo jeer ku jirta. Waxay ahayd Mark Gurman oo muuqaalkaan cusub keenay, inkasta oo ay jiraan warar xan ah oo ku saabsan shaqadan dhowr jiilaal, iyo wax umuuqda kuwo aan muhiim ahayn ayaa macnaheedu noqon karaa isbedel xagjir ah oo ku dhaca iPhone-ka.
Apple Watch wuxuu ahaa qalabkii ugu horreeyay ee Apple ee leh shaashadda had iyo jeer, "Had iyo jeer On Display", tan iyo taxanaha 5. Waxaan ka booday jiilkaas Apple Watch, laakiin waxaan la dhacay Taxanaha 6, oo ay sidoo kale ku jiraan shaqadan. Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa joojiya sababta oo ah waxay ku lug leedahay isticmaalka batteriga oo sareeya, laakiin xaqiiqadu waxay tahay mar hadaad laqabsato, way adagtahay inaad ka tanaasusho waxay ku siiso. Haa, batteriga ayaa dhaqso u dhamaanaya, laakiin Apple waxay hirgalisay shaqadan si markaa saameyntu u yaraato sida ugu macquulsan, waana xitaa ka sii yaraanaysaa haddii aad isticmaashid qaybaha uu madowgu yahay midabka ugu badan, maadaama dhammaan qaybaha madow ee shaashadda wuu maqnaan doonaa Farsamada ayaa la filayaa inay aad ugu egtahay iPhone 13.
Saacadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad aragto waqtiga adigoon u rogin curcurkaaga, laakiin iPhone-ka shaqadani way sii dheeraan kartaa, oo haddii Apple ay ku darsato moodeelka cusub ee iPhone, waa inay si buuxda uga faa'iideysataa. Waa maxay tan macnaheedu? Micno malahan shaashadda qufulka marwalba oo aan aragno oo dhan waa waqtiga, taas oo ah waxa dhaca xilligan markii shaashadda la hawlgaliyo. Haddii aan hadda haysano shaashad had iyo jeer daaran, waxay noqon doontaa inaan awoodno inaan aragno macluumaad dheeraad ah, sida tirada ogeysiisyada aan hayno, iyo sababta aan u noqonaynin cimilada aaggeenna., ama ballamaha jadwalka soo socda. Taasi waa, haddii shaashadda mar walba shaashadu timaaddo, waa inay ku timaaddaa iyadoo isbeddel lagu sameynayo qaabeynta shaashadda qufulka, waana wax aan sugeynay muddo dheer.
Waxaan horey u ogaanay macruufka 15, laakiin Apple marwalba waxay leedahay qalab kor u qaadaya casriga cusub, waana hubaa inaan arki doono wararka ku saabsan iOS 15 ee aan nala tusin soo bandhigii ugu dambeeyay ee muhiimka ah maxaa yeelay waa inaan sugnaa. iPhone 15 ayaa la siidaayay, maadaama ay noqon doonaan isbadalo qaas ah oo loogu talagalay taleefankan casriga ah Kuwa naga mid ah ee u beddelaya qaabka cusub ee iPhone-ka, tani waa war weyn, mana ahan wax badan kuwa qorsheynaya inay la joogaan moodeelkooda hadda.. Hadana had iyo jeer shaashadda lagu soo daro iPhone 13, waa inaan sugno shaashad quful cusub, ugu dambayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Shaashadda had iyo jeer ku jirta shaashadda iPhone 13 waxay noqon doontaa midda sare u qaadaysa shaarka
WhatsApp ayaa horeyba noo ogolaatay inaan ku biirno wicitaan fiidiyoow wakhti kasta
Sida wax looga beddelo xulashooyinka marin u helka ee barnaamijyada ku jira iOS 15